သင့်ရဲ့ iTunes ကစာကြည့်တိုက်တစ်ဦးက New တည်နေရာသို့ရွှေ့ရန်
Macs လမ်းညွှန်များ & ကျူတိုရီရယ်
အဆိုပါ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်နေတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အရွယ်အစားကန့်သတ်မထားဘူး, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အ drive ပေါ်တွင်အာကာသရှိရဲ့အဖြစ်ကိုသင်တီးလုံးသို့မဟုတ်အခြားမီဒီယာဖိုင်တွေထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
ဒါကလုံးဝကောင်းတစ်ဦးအရာမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျသတိထားရမှာမဟုတ်နေတယ်ဆိုရင်, သင့် iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်လျင်မြန်စွာ drive ကိုအာကာသ၎င်း၏မျှတသောဝေစုထက်ပိုတက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပ drive ရန်သင့် startup drive ကိုမှသင်၏ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့မသာသင့်ရဲ့ startup drive ပေါ်တွင်အချို့နေရာလွတ်နိုင်, ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်ကြီးထွားဖို့ပိုတဲ့အခန်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်ဘာမှရွှေ့မီ, သင်၏တေးဂီတသို့မဟုတ်မီဒီယာဖိုင်တွဲစီမံခန့်ခွဲရန်အတည်ပြုသို့မဟုတ် iTunes တက် setting ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ဝံပုလှေမွန်း, Inc ၏ screen shot ယဉျကြေး
ဒီလမ်းညွှန်ကို iTunes version ကို7အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းတွင်သို့သော်အချို့အမည်များကိုသင်အသုံးပြုနေသော iTunes ကို၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. အနည်းငယ်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, iTunes ကို 8 နဲ့အစောပိုင်း၌, မီဒီယာဖိုင်တည်ရှိသည်ရှိရာစာကြည့်တိုက် folder ကို iTunes ကိုဂီတဟုခေါ်သည်။ iTunes ကိုဗားရှင်း9နဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုနှစ်တွင်, တူညီတဲ့ folder ကို iTunes ကမီဒီယာဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ iTunes ကိုဂီတ folder ကို iTunes က 8 သို့မဟုတ်အစောပိုင်းကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့လျှင်ရန်ထပ်မံရွှံ့ရေသည်, ထို့နောက်သူကသင်ဒီမှာဖော်ပြထား iTunes.The ညွှန်ကြားချက်၏ပိုသစ်သောဗားရှင်းကို update ပင်လျှင်, အဟောင်းများကိုအမည် (iTunes ကိုတေးဂီတသံ) ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မည်ကြပါစေယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ် iTunes ကိုဗားရှင်း 12.x ၌တွေ့
သငျသညျကိုစတင်ခင်မှာ, သင်ကလက်ရှိရှိရမည် သင့် Mac ၏ backup လုပ်ထား ဒါမှမဟုတ်အလွန်အနည်းဆုံးတစ်ဦးကလက်ရှိ iTunes ကို၏ backup လုပ်ထား ။ သင့်ရဲ့ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်ရွေ့လျားဖြစ်စဉ်မူရင်း source ကိုစာကြည့်တိုက်ဖျက်ပစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားသင့်တယ်နဲ့သင်တစ်ဦး backup လုပ်ထားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ဂီတဖိုင်များကိုအားလုံးဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။
playlists, Ratings အဖွဲ့နှင့်မီဒီယာဖိုင်များ
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏အပါအဝင် iTunes ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, အပေါငျးတို့သထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မယ် ဖွင့်စာရင်းများကို နှင့် ratings အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မီဒီယာဖိုင်; ဂီတနှင့်ဗီဒီယို, ဒါပေမယ့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ, podcasts, စတာတွေမပေးမယ့်သို့ရာတွင် iTunes ကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယထိန်းသိမ်းထားရန်အဘို့အအလို့ငှာ, သင်ကတေးဂီတသို့မဟုတ်မီဒီယာဖိုင်တွဲဖွဲ့စည်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၏တာဝန်ခံအတွက်ဖြစ်ရစေရပါမည်။ သငျသညျ iTunes ကိုတာဝန်ခံဖြစ်ချင်ကြဘူးလျှင်, သင့်မီဒီယာဖိုင်တွဲရွေ့လျားဖြစ်စဉ်တုန်းပဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင် metadata ကိုပစ္စည်းများတွေ့ပါစေခြင်းငှါ ဤကဲ့သို့သောဖွင့်စာရင်းများကိုအဖြစ် နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထွက်သုတ်ပါလိမ့်မည်။
iTunes ကသင့်ရဲ့မီဒီယာ Folder ကိုစီမံခန့်ခွဲဖူး
သင်အမှန်တကယ်ဘာမှရွှေ့မီ, သင်၏တေးဂီတသို့မဟုတ်မီဒီယာဖိုင်တွဲစီမံခန့်ခွဲရန်အတည်ပြုသို့မဟုတ် iTunes တက် setting ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
/ Applications ကိုမှာတည်ရှိပါတယ် iTunes ကို, စတင်ရန်။
အဆိုပါ iTunes ကို menu ကနေ, iTunes ကို select လုပ်ပါ, Preferences ကို။
ဖွင့်လှစ်သော Preferences ကိုပြတင်းပေါက်မှာအဆင့်မြင့်အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။
သည် "ဖွဲ့စည်း iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲကိုသိမ်းဆည်းထားပါ" ကို item မှလာမယ့်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှတ်လည်းမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ (iTunes ကို၏အစောပိုင်းဗားရှင်း "ဖွဲ့စည်း iTunes ကိုဂီတဖိုင်တွဲထားပါ။ " ဟုပြောနိုင်ပါသည်)
အဆိုပါ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးမြောက်ရန်လာမည့်စာမျက်နှာ Continue ။
တစ်ဦးက New iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်တည်နေရာ Creating
iTunes ကိုသင်တို့အဘို့မူရင်းစာကြည့်တိုက်မီဒီယာဖိုင်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ iTunes ကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်နဂိုအတိုင်းအဆိုပါဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သစောင့်ရှောက်မည်။ ဝံပုလှေမွန်း, Inc ၏မျက်နှာပြင်မဲဆောက်ယဉျကြေး
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့က iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲ (ယခင်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ) စီမံခန့်ခွဲရန် iTunes ကိုဖွင့်လှစ်တော့အကြောင်း, ဒါကြောင့်စာကြည့်တိုက်များအတွက်အသစ်တစ်ခုတည်နေရာဖန်တီး, ပြီးတော့သူ့ရဲ့သစ်ကိုအိမ်သို့လက်ရှိစာကြည့်တိုက်ကိုရွှေ့ဖို့အချိန်ပါပဲ။
တစ်ဦးက New iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်တည်နေရာ Create
အသစ်ရဲ့ iTunes ကစာကြည့်တိုက်တခုပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက ပြင်ပ drive , သေချာ drive ကိုသင့် Mac သို့ပလပ်များနှင့်ဖွင့်ပါစေ။
ဒါကြောင့်ပြီးသားပွင့်လင်းမပါလျှင်, iTunes ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
အဆင့်မြင့်ဦးစားပေး window ၏ iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲတည်နေရာကဏ္ဍမှာပြောင်းလဲခြင်း button ကို click လုပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သော Finder ကိုပြတင်းပေါက်၌ , သင်အသစ်က iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲဖန်တီးချင်ပါတယ်ရှိရာတည်နေရာကိုလမ်းညွှန်။
အဆိုပါ Finder ကိုပြတင်းပေါက်မှာနယူး Folder ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖိုင်တွဲအသစ်ကိုအတွက်နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ။ သင်ဆန္ဒရှိဒီဖိုလ်ဒါကိုဘာမှခေါ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ငါ iTunes ကိုမီဒီယာကိုသုံးပြီးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ Create button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ပွင့်လင်း button ကို click လုပ်ပါ။
အဆင့်မြင့်ဦးစားပေး window ထဲတွင် OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျမှာ "ဖွဲ့စည်း iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲကိုသိမ်းဆည်းထားပါ" preference ကိုကိုက်ညီမှအသစ်ရဲ့ iTunes ကမီဒီယာ folder ထဲမှာဖိုင်တွေရွှေ့နှင့်အမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် iTunes ကိုသင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်း၏နယူးတည်နေရာသင်၏ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက် Moving
iTunes ကိုသင်တို့အဘို့မူရင်းစာကြည့်တိုက်မီဒီယာဖိုင်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ iTunes ကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်နဂိုအတိုင်းအဆိုပါဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သစောင့်ရှောက်မည်။
iTunes ကို, ကို select လုပ်ပါဖိုင်မှတ်တမ်းခုနှစ်, စာကြည့်တိုက်, စာကြည့်တိုက် Organize ။ (iTunes ကို၏အသက်ကြီးဗားရှင်းစာကြည့်တိုက်ကိုခိုင်မာအောင်, ဖိုင်မှတ်တမ်း, စာကြည့်တိုက်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ )
အဆိုပါ, ဖွင့်လှစ်ကြောင်းစာကြည့်တိုက်ဝင်းဒိုးကို Organize ဖိုင်များခိုင်မာအောင်, နှင့် (iTunes ကို၏အဟောင်းတွေဗားရှင်းမှာ check box ကိုစာကြည့်တိုက်ကိုခိုင်မာအောင်တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရ) OK ကိုနှိပ်ပါဘေးတွင်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားနေရာပါ။
iTunes ကိုအစောပိုင်းကသင် created သစ်ကိုတဦးတည်းမှအဟောင်းကိုစာကြည့်တိုက်တည်နေရာမှသင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုအားလုံးကူးယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာခဏတစ်ယူ, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်ရွှေ့ကိုအတည်ပြု
တစ်ဦး Finder ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးသစ်ကို iTunes ကမီဒီယာဖိုင်တွဲ navigate ။ ဖိုင်တွဲအတွင်း၌သင်မူရင်းမီဒီယာဖိုင်တွဲမြင်တူညီဖိုလ်ဒါနှင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သေးမူရင်းဖျက်ပစ်ကြပြီမဟုတ်ကတည်းကသင်တဦးတည်းဟောင်းတည်နေရာနှင့်တည်နေရာအသစ်ဖေါ်ပြခြင်းတဦးတည်းဖေါ်ပြခြင်းနှစ်ခု Finder ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်, ရှိသမျှကောင်းကြောင်းအတည်ပြုကြောင့်ပြီးသားပွင့်လင်းမယ့်သည်မှန်လျှင်, iTunes ကိုဖွင့်ပြီးလျှင်, iTunes ကို toolbar ကိုအတွက်စာကြည့်တိုက်အမျိုးအစားကိုရွေးပါရန်။
အဆိုပါ sidebar မှာအထက် menu ကိုချတစ်စက်အတွက်ဂီတကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျစာရင်းသင့်ရဲ့ဂီတဖိုင်များကိုအားလုံးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိသမျှတို့, တီဗီရှိုး, etc iTunes ကိုဦးဖိုင်များ, podcasts တွေကို, ထိုအတည်ပြုနိုင်ရန် iTunes ကို sidebar မှာသုံးပါ, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖွင့်စာရင်းများကိုအပေါငျးတို့သပါဝင်သောအတည်ပြုပေးဖို့ sidebar မှာ၏ Playlist ကိုဧရိယာစစ်ဆေးပါ။
iTunes ကို Preferences ကိုဖွင့်ပါနှင့်အဆင့်မြင့်အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။
အဆိုပါ iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲတည်နေရာအသစ်ရဲ့ iTunes ကမီဒီယာဖိုင်တွဲများနှင့်မဟုတ်အဟောင်းများထဲမှစာရင်းပြုစုသင့်တယ်။
အရာအားလုံး OK ကိုကြည့်ပါလျှင်, iTunes ကိုသုံးပြီးအချို့ဂီတသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကစားစမ်းပါ။
ဟောငျး iTunes ကိုစာကြည့်တိုက်ဖျက်ခြင်း
အရာအားလုံး OK ကိုထွက်စစ်ဆေးနေလျှင်, သင်မူရင်း iTunes ကိုမီဒီယာဖိုင်တွဲ (သို့မဟုတ်ဂီတဖိုင်တွဲ) ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ iTunes ကိုမီဒီယာသို့မဟုတ် iTunes Music ကို folder ကိုထက်အခြား, မူရင်း iTunes ကိုဖိုင်တွဲဒါမှမဟုတ်ပါရှိသည်ဆိုဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်မထားပါနဲ့။ သငျသညျစသည်တို့ကိုပု iTunes ကို folder ထဲမှာအရာအားလုံးထက်, သင့်ဖွင့်စာရင်းများကို, အယ်လ်ဘမ်အနုပညာ, ratings, ဖျက်ပစ်လျှင်, သူတို့ကိုထပ်ဖွသို့မဟုတ် (အယ်လ်ဘမ်ကိုအနုပညာ) သူတို့ကို download လုပ်ပါရန်သင့်အားလိုအပ်, သမိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
HandBrake ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Mac ကိုမှဒီဗီဒီကူးပါဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးနဲ့ Mac မှစ. အကွိမျမြားစှာအီးမေးလ်များ forward ပြုလုပ်ပေးဖို့တစ်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း Learn
Windows7ကို PC များနှင့်အတူဝေမျှမယ် OS X ကိုခြင်္သေ့ဖိုင်များ
သင့်ရဲ့ Mac ပေါ်တွင် Dropbox ကို Install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
OS X နှင့် MacOS Sierra အဘို့အဆာဖာရီထဲမှာအလိုအလျောက်ဖြည့်ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Parallel Desktop ကိုပိုကောင်းအောင် - Parallel ဧည့် OS ကို Optimization
ပွင့်လင်း Directory ကိုများနှင့်ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ - Up ကို OS X ကိုခြင်္သေ့ဆာဗာ Set
တစ်ဦးက New Hard Drive ကို (OS X ကို Leopard) အား Time Machine Backups တွေကို Move
Mac OS X မှာခြင်္သေ့ဆာဗာ Installing
Panasonic က TC-L42ET5 စမတ် Viera 3D LED / LCD TV - ဆန်းစစ်ခြင်း
သင်ကခိုးကွန်ပျူတာများ၏ရဲ့ MAC Address ကို Trace နိုင်သလား?
Access ကို 2013 ခုနှစ်ခရီးစဉ်: အဆိုပါ User Interface
IPad3နှင့်အိုင်ပက်အကြားခြားနားချက် 4
တစ်ဦး Hard Drive partitioner လုပ်နည်း
အီးမေးလ်ရဲ့ HTML ကိုရင်းမြစ်တည်းဖြတ်ခြင်းမှတစ်ဦးကအဆင့်-by-step လမ်းညွှန်
Comcast Cable ကိုမှတဆင့် 4K ကိုကြည့်ရှုခြင်း - သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
မောင်းနှင်နေစဉ်တွင်နိုးလော့ Stay လုပ်နည်း
အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးက iPad ဝယ်ပါရန်
Windows ကို EFS နဲ (စာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်စနစ်) ကိုသုံးပြီး
သင့်ရဲ့ Browser ကိုအတွက်ဂျီမေးလ်အကောင့်အကြားတွင် Switch ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
PSP ဟာ့ဒ်ဝဲဖို့ PSP လမ်းညွှန်
မိုဘိုင်းဗီဒီယိုမျှဝေခြင်း Apps ကပ spawn Mini ကို Movie, လုပ်ငန်းရှင်ကြီး
Stats ကတော့သင်ဟာ Pokemon Go ကိုအတွက်ခြေရာခံကိုစောင့်ထိန်းသင့်ဘယ်?
ပထဝီစုပေါင်းအိုင်ပက်ထဲသို့ MIDI Controller နှစ်မြောက်မွေးနေ့
Login Approvals စာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Facebook Account အားကာကွယ်ပါလုပ်နည်း
အဘယ်သို့ငါက Windows အတွက်စက်ပစ္စည်းရဲ့အဆင့်အတန်း View သလား?
သင်က Mac OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာရိုက်ထည့်အဖြစ်စာလုံးပေါင်း Check
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံးကား GPS စနစ် tracker 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ